China Golden Barrel kaktus Echinocactus Grusonii Hildm ụlọ ọrụ na-emepụta | Anwụ na-acha Ifuru
Echinocactus grusonii gbara gburugburu na-acha akwụkwọ ndụ, na ogwu ọlaedo, siri ike ma dị ike. Ọ bụ ụdị onye nnọchianya nke ogwu dị ike. Osisi ndị a kụrụ n’ubi nwere ike itolite buru ibu, bọọlụ na-ama nri oge niile iji chọọ ụlọ nzukọ ahụ mma ma na-amukekwu. Ha kachasị mma n'ime ahịhịa n'ime ụlọ.
Size: obere, media, ibu
Dia: 5-7CM, 8-10CM, 11-13CM, 14-16CM, 16-18CM, 18-20CM
Echinacea nwere mmasị anwụ, ọ na-adịkarị ka mmiri na-eme nri, aja aja nke nwere ezigbo mmiri nwere ike ịbanye. N'oge okpomọkụ dị elu na oge na-ekpo ọkụ n'oge ọkọchị, a ga-ekpuchi gburugburu ahụ nke ọma iji gbochie ọkụ ọkụ site na ọkụ ahụ. Akọtara aja: a ga - agwakọta ya na otu aja siri ike, loam, ire ere na obere mgbidi ash ochie. Ọ chọrọ ọtụtụ ìhè anyanwụ, mana ọ ka nwere ike kpuchie ya nke ọma n'oge ọkọchị. A na-echekwa oge oyi na 8-10 Celsius, ma achọrọ ihicha. Ọ na-eto ngwa ngwa n'okpuru ọnọdụ nke ala na-eme nri na ikuku ikuku.
Mara: Leba anya na nchekwa ọkụ. Echinacea anaghị ajụ oyi. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-agbadata ihe dịka 5 ℃, ịnwere ike ịkwaga Echinacea n'ime ebe anwụ na-acha n'ime ụlọ iji mee ka ite ahụ kpoo ma kpachara anya maka ikuku oyi.
Atụmatụ ịkọ nri: N'okpuru ọnọdụ iji hụ na ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ chọrọ, jiri ihe nkiri plastik na-eme ka ọ bụrụ ọkpọkọ iji kpuchie akụkụ niile na ifuru ifuru iji mepụta obere gburugburu ebe dị elu na iru mmiri. Ọlaedo amba ọlaedo nke usoro a na-emewanye Big dị ngwa, ogwu ahụ ga-esikwa ike.
Nke gara aga: China anyadokwa kaktus Succulent Plants Home Plant
Osote: Lucky achara Dracaena Tower achara Layer achara Pagoda